စီအိုင်အေ CIA နဲ့ ”ဝီးကီး” စွယ်စုံ (Wikipedia) တို့ မြင်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေး III | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » စီအိုင်အေ CIA နဲ့ ”ဝီးကီး” စွယ်စုံ (Wikipedia) တို့ မြင်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေး III
Posted by Kyaemon on May 2, 2012 in Business & Economics, Community & Society, Education, Money & Finance, Society & Lifestyle |9comments
China CIA Factbook Japan Economy Trading Partner USA
ရှေ့က” စီအိုင်အေ CIA နဲ့ ”ဝီးကီး” စွယ်စုံ (Wikipedia) တို့ မြင်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေး II ” ရဲ့ အ ဆက်
ဂျပန်ရဲ့ ကုန်သွယ်ဘက်တွေ Trading Partners အ နက်မှ ယူအက်စ် နဲ့တရုပ်နိုင်ငံ တို့ဟာ
ရှေ့ကပြေးနေကြကြောင်း အရေးပါကြောင်း သိကြတာ၊
သို့သော် ဘယ်နိုင်ငံ ကဘဲ ဂျပန်အတွက် ကုန်သွယ်ဘက် နံပါတ် တစ်၊
ထိပ် သီးနိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာရအောင်၊
ကုန်သွယ်ဘက် ဆိုတာ ကုန်သွင်းရုံ ဒါမှမဟုတ် ကုန်ပို့ရုံ “တလမ်းသွား” ကို မ ဆိုလိုပါ၊
အသွားနဲ့အလာ အဝင်နဲ့အထွက် ” နှစ်လမ်းသွား “
အပြန်အလှန် အကျိုးပြုတဲ့ ရွှေလမ်းငွေလမ်း
ဒါကြောင့်မို့ ဂျပန် နဲ့ တရုပ်နိုင်ငံတို့ အကြား၊
ဂျပန် နဲ့ယူအက်စ် တို့ အကြား၊
Import ဝယ်ယူတာ နဲ့ Export ပြန်ရောင်းတာတွေ ၊ ကို
အောက်ပါ ဇယား (၇) မှာ ပြုစုဖော်ပြ ထားတာ
၂၀၀၇ ကနေ၂၀၁၁ မှတ်တမ်း အရ ဖျမ်းမျှအားဖြင့်
တရုပ်နိုင်ငံက ၂၂၅ ဘီလီယန် ဒေါ်လာနဲ့ထိပ်ကဖြစ်ပြီး၊
ယူအက်စ် ကဒုတိယ ပါ၊
၂၀၀၇ နဲ့ ၂၀၀၈ မှာ ယူအက်စ် က သာ သော်လည်း
၇ ဘီလီယန်၊၈ ဘီလီယန်ဆိုလို့သိပ်မကွာပါ၊
အဲ ဒီနောက်ပိုင်းက စပြီး တရုပ်နိုင်ငံ က ဆက်တိုက် သာ နေပြီး၊
ပိုမိုတာတွေ က ၂၂ ဘီလီယန် ကနေ ၁၂၉ဘီလီယန် ထိ ရှိကာ
တ နှစ်ပြီးတ နှစ် တက်တက် လာ တာ၊
ပိုမိုကုန်သွယ်လာတဲ့သင့် ငွေပမာဏကိုရွေးပြီး နှိုင်းမယ်ဆိုရင်
မူလက ယူ အက်စ် ကသာ ခဲ့ တဲ့ ၈ ဘီလီယန် ထက် တရုပ်နိုင်ငံက တောင်
မှီလာရုံ မကလို့ ၃ ဆ က နေ အဆ ပေါင်း ၁၆ ဆ အထိ (၁၂၉ ဘီလီယန် တောင်) ပိုမိုပြီး
ကုန်သွယ် ခဲ့ တာ လို့တွေ့နိုင် တာ ပါ
ဂျပန်အတွက် တရုပ်နိုင်ငံ က (ဆိုးကျိုး ပေး တာ ထက်)
ဂျပန်က ဖွံ့ဖြိုး တဲ့နိုင်ငံ အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီး ရပ်တည် နိုင်ဘို့ရာ
အခြားနိုင်ငံတွေ ထက်တောင် တရုပ်နိုင်ငံ ကို အားကိုး အမှီသဟဲ
အပြုရဆုံး လို့ပြောရင် မမှား ပါ၊
ယူအက်စ်က ငွေလဲလှယ်နှုန်းကို အတင်းတက်ခိုင်းလို့
ဂျပန် က တချိန်မှာ Prolonged Recession စီးပွါးရေး ကျဆင်းသွားတာ
လူတွေလဲ တော်တော်များများ ဒုက်ခရောက်
ယင်းသို့စီးပွါးရေး ကျတာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တာ ကနေပြီး
ပြန်တက်လာတာက တရုပ် နိုင်ငံ နဲ့ ပိုမို ကုန်သွယ်လာလို့ဖြစ်ကြောင်း
စီးပွါးရေးပါရဂူ တွေက အသိအမှတ်ပြု မှတ်တမ်းတင် ရေးသားကြတာ၊
ဂျပန် ဝန်ကြီးချုပ် Noda နိုဒါ က New Delhi နယူးဒေလီ ဆီသွားပြီး
အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေ အစား၊ ဂျပန် Yen ရဲန် နဲ့
အိန်ဒီယ Rupee ရူပီ ငွေစက်ကူ နဲ့ဘဲ ကုန်သွယ် ငွေဖလှယ် ဘို့
၁၅ ဘီလီယန် (သန်းပေါင်း ၁၅၀၀၀ သန်း) ဒေါ်လာ တန်ဘိုးရှိ စာချုပ် ချုပ်၊
(“Amid global economic uncertainties,..” ဆိုရာ၌
ဥရောပ နဲ့အမေရိကန် စီးပွါးရေး မတည်ငြိမ်မှု မ သေချာ မ ရေရာ တာ တွေ၊
အထူးသဖြင့် QE ၁ QE၂ လို အမေရိကန်ငွေစက်ကူ
Trillion တြီလီယန် (၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀) ချီပြီး ရိုက်နှိပ်မှာကို
စိုးရိမ် ကြတာ ကိုဆိုလိုတာ ဖြစ်ဘို့များ)
“Amid global economic uncertainties, ensuring the stability of the financial markets is all the more important for the stable economic development of the two countries,” Japanese prime minister Yoshihiko Noda and Indian prime minister Manmohan Singh said inajoint statement after their meeting in New Delhi
IMF ကမ်ဘာ့ ငွေကြေးရံပုံငွေ အဖွဲ့ ကိုထောက်ကူပံ့ပိုးရာမှာ ဂျပန်နဲ့တရုပ်နိုင်ငံ တို့က
ပူးပူးကပ်ကပ် တိုင်ပင်ပြီး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့
ဂျပန်ဘဏ်ဋာရေး ဝန်ကြီး Azumi အာဇူမီကပြော
Bank of America Merrill Lynch တိုကျိုဌာနခွဲ
အဆင့်မြင့်နိုင်ငံခြားငွေ လေ့လာသူ Tomoko Fujii ဖူဂျီ ပြောတာက
ဥရောပနိုင်ငံတွေကကိုယ့်နိုင်ငံကို ကိုယ့်ဟာကို ကူညီပန့်ပိုးဘို့ ပိုမိုလုပ်ဆောင်ဘို့လိုအပ်ကြောင်း၊
US ယူအက်စ် ကလဲ ရံပုံငွေ တွေ မထည့် တော့ ဘူး လို့ငြင်းပယ်ခဲ့ကြောင်း၊
အခြားနိုင်ငံတွေ (တရုပ်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံ) က ရံပုံ ငွေပံ့ပိုးကူညီဘို့ ဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်လောက် အောင်၊
ဥရောပနိုင်ငံတွေက တင်ပြတဲ့အကာအကွယ် ငွေကြေးအစီအစဉ် ဟာ ယုံကြည်လောက်အောင်မရှိကြောင်း၊
ဥရောပ နိုင်ငံတွေ ရဲ့ စီးပွါးရေးပြသနာတွေမပြီးဆုံး သေးကြောင်း၊
ဂရုတစိုက် အကဲခတ် စောင့်ကြည့် လေ့လာဘို့လိုအပ်ကြောင်း၊
အကောင်းဘက်ကနေကြည့်ဘို့လဲ မတတ်နိုင် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊
ဂျပန်ဘဏ်ဋာရေး ဝန်ကြီး Azumi အာဇူမီပြောတာ က
အာရှ မှာ စီးပွါးရေးပြသနာ မ ပေါ်ရအောင် ဂျပန်နဲ့တရုပ်နိုင်ငံတို့က
Japan, China to ‘Consult Closely’ on Support for IMF, Azumi Says – Businessweek
European finance ministers decided March 30 that 500 billion euros ($667 billion) in fresh money would be added to the 300 billion euros already committed to create an 800 billion-euro defense against the two-year-old turmoil. Euro-area finance chiefs insisted that they’ve fulfilled their side of the bargain.
“The firewall European nations presented in March isn’t convincing enough to give momentum to discussions for other countries’ financial contributions to the IMF,” Fujii said.
“Europe’s crisis hasn’t ended” even as the situation improves from last year, Azumi said today. “This still needs careful monitoring and we can’t yet become optimistic.”
Japan and China have yet to decide on cooperation with the IMF, and will continue their discussions on this until the G-20 meeting, Azumi said today. The nations agreed to strengthen and expand Asia’s regional currency swap agreement, sharingaview that “there isaneed for Japan and China to cooperate to prevent crisis in Asia,” he said.
ကြေးမုံဂျီးအမျိုး တရုတ်ကြီးဆိုရင် မြန်မာပြည်ဂနေ သက်ရှိသက်မဲ့ သဘာဝသယံဇာတမှန်သမျှ ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ပေါချောင်ကောင်း တင်သွင်းဒယ်။ အပြန်အလှန်အနေနဲ့ ပေါချောင်စုတ် ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ပေါက်ကရအစားအသောက်၊ အရေအသွေးညံ့ လက်လီလက်ကားပစ္စည်း အမျိုးစုံဂို ကုန်ချောအနေနဲ့ ဈေးကြီးတင် ပြန်ပို့ဒယ်။
ကြေးမုံဂျီးပြောဂျင်ဒဲ့ နှစ်လမ်းသွားဆိုဒါ အဲဒါလား…။ ((((ကုန်သွယ်ဘက် ဆိုတာ ကုန်သွင်းရုံ ဒါမှမဟုတ် ကုန်ပို့ရုံ “တလမ်းသွား” ကို မ ဆိုလိုပါ၊ အသွားနဲ့အလာ အဝင်နဲ့အထွက် ” နှစ်လမ်းသွား “ အပြန်အလှန် အကျိုးပြုတဲ့ ရွှေလမ်းငွေလမ်း ဖောက်ကား ဝယ်ယူကြတာကိုဆိုလိုတာ၊))))))
ကြေးမုံဂျီးရယ် ကြောင်ကြီးဂို ခွေးမလွှတ်လိုက်ပါနဲ့… ကြောင်လွှတ်ပေးနော်.. ပျင်းလွန်လွန်းလို့ဘာ။ ကြေးမုံဂျီးကိုယ်တာလာမယ်ဆိုရင်ဒေါ့ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ.. အတိုင်းထက်အလွန် တံခွန်နဲ့ကုက္ကား…။ စိန်ခေါ်ရင် တိမ်ပေါ်ထိ လိုက်ဝံ့ဒဲ့ ဦးကြောင်ကြီးဒဲ့ဟေ့…. ဗေထိ ဗေထိ ဗေပုံထိ…။ :cool:
တရုပ် ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီး FTA ဆိုတဲ့ အခွန်လွတ် စီးပွါးရေး သဘောတူ စာချုပ်နိုင်ငံအုပ်စု ကို
ဖွဲ့နိုင်ဘို့ ပိုပြီး အားသွန်ခွန်စိုက် အရှိန်မြှင့်တင်ပြီး လုပ်ဆောင်သွားမယ် လို့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် စနေနေ့ က ပြောသွား
တရုပ်နဲ့အခြား အာရှအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ တွေရဲ့ ဝယ်နိုင်အား ဟာ လျင်မြန်စွာ တိုးချဲ့ကြီးထွား နေတာကို
ဂျပန် က ပိုပိုပြီး အားကိုးမှီခိုလာ ရ တာ ၊
မိမိ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွါးရေးက ထိုင်းမှိုင်းတာကို ကုစားဘို့ လို တာရယ်၊
ဒီရေ ပမာ တိုးတက် ပြန့်ပွါး နေတဲ့ လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ် ရေး စံနစ် ကြောင့်
အဲဒီဒေသ တဝိုက် က စီးပွါးရေးဟာ အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲ နေတာကို
လက်လွှတ်ပြီး ကျ ကျန်ရစ် မ သွား ရ အောင်လဲလိုတာ၊
FTA သုံးနိုင်ငံ စီးပွါးရေး အဖွဲ့ ဖော်ဆောင်ရန် အမြန် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ဘို့ လိုမယ် လို့ပြော၊
Japan’s Leader Turns Trade Focus to China, South Korea
TOKYO—Japan’s prime minister pledged Saturday to accelerate efforts to formafree-trade agreement with China and South Korea, an ambitious pact that could create an integrated trade zone rivaling in size the North American Free Trade Agreement and the European Union.
As Japan increases its reliance on rapidly expanding demand in China and other Asian neighbors to fuel its own sluggish economy, Tokyo is trying to avoid getting left behind the waves of trade liberalization sweeping the region. Japan wants to start formal negotiations on the trilateral pact, known as an FTA,”as soon as possible,” and will urge the other …
သယံဇာတ ကြွယ်ဝ တဲ့ ကနေဒါ နိုင်ငံက မိမိတို့ ကြီးပွါးတိုးတက်ဘို့
တရုပ်နိုင်ငံ ကို ဦးတည် မျှော်မှန်း
တချိန်တုံးက အခိုင်အမာ ကြိုးချည်နှောင်ဖွဲ့ထားသလိုဘဲ
်Canada ကနေဒါ က US ယူအက်စ် ကို
ခုတော့ Canada ကနေဒါ ရဲ့နောင်ရေး အတွက်
တရုပ်နိုင်ငံဘက်ကို ဦးတည်ပြီးတော့ အားထား နေရပြီ၊
US ယူအက်စ် က ဝယ်နိုင်အား “ကျ” သွားတော့
မိမိတို့ရဲ့ သယံဇာတ ထုတ်ကုန်တွေ အတွက်
ဝယ်မဲ့သူများ ရှာနိုင်ဘို့ ကြောင့်ကြ ပူပင် လာတော့တာ
“အနောက်နိုင်ငံကိုချည်း အားကိုးဘို့၊ တရုပ်ကြီး ကုလား ကြီး ကို အထင်မကြီး ပစ်ခွါ ဘို့၊
ဒါမှ သူဋ္ဌေး တခါတည်း ဖြစ်မှာ တို့” နဲ့ တခြားဆီ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေမလား?
ကနေဒါ ကလဲ င “အ” င “တုံး” ဘဲ၊ ကိုယ့်ဟာက အဘိုး အနက်ဃ တန်တာ၊
သူများပစ်စည်း က”အစုတ် ပလုတ်” ဆိုပြီး
ကိုယ့် သယံဇာတ တွေ ကို တပိုက်ပိုက် မထားဘဲ၊
ဘာဖြစ်လို့ ဖောက်သယ်မရှိမှာကို စိုးရိမ်နေရတာလဲ?
ယူအက်စ်၊ အနောက် နိုင်ငံ၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ တရုပ်၊ အိန်ဒိယ ကိုရောင်းတဲ့
Saudi Arabia ဆောဒီ အာရေးဗျ၊ Dubai ဒူဘိုင်၊ Iranအီရန်၊
Nigeria နိုင်ကြီးရီးယား တို့လဲ “ငတုံး” ဘဲ လို့ပြော ရမလား?
VANCOUVER –For almostacentury, Canada’s economy has been firmly tethered to its much larger southern neighbor. Now, Canadian officials and executives also are betting their future on China.
Climbing oil production in the U.S. is upending American demand for Canadian hydrocarbons. That has spooked Ottawa, suddenly worried about finding buyers for its own growing crude exports, almost all of which now flows
Canada’s Growing China Trade Connection 5/13/2012 10:30:00 PM
For almost two centuries, the U.S. has been Canada’s most important trading partner. Now China is gaining ground. Video and reporting by WSJ’s Chip Cummins.
၉ ခုမြောက်လက်မလေး တစ်ချောင်းထောင်အားပေးသွားပါတယ်
လုပ်ကြံ ဖို့ကြံစည် ထား တာ ကို တိဘက် တွေ ရဲ့သတင်း ပေး မှု အရ ဖော်ထုတ် နိုင် ခဲ့ တယ်
လို့ဒလိုင်လား မား ရဲ့ကိုယ်ရေး အတွင်းဝန် ချီမီး ချုပ်ကျက်ပါ ဗြိတိသျှ သတင်းစာ
သေဆုံး သွား အောင် စီစဉ် ထား တယ်လို့အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ဒါရမ်ဆာလား မှာ အခြေစိုက်တဲ့ အဝေး
ရောက် တိဘက် အစိုး ရ က သတင်း ထုတ် ပြန် ပါတယ်။
အသက် ၇၆ နှစ် အရွယ် ရှိ ပြီ ဖြစ်တဲ့ နိုဘဲလ် ငြိမ်း ချမ်းရေး ဆုရှင် ဒလိုင်လား မား က သူ့ကို လုပ်
ကြံစည် မှု နဲ့ပတ် သက် ပြီး သတင်း ထောက် တွေ ကို ပြောရာ မှာ ” တကယ်ပါ ပဲ သူ တို့က ကျွန်
တော် ရဲ့ကိုင်တွယ် ကောင်းချီးပေး မှု ကို ခံ ယူစဉ် မှာ သူတို့ဆီက အဆိပ် တွေ ကျွန်တော့် ဆီ ကူး
စက် သွား အောင် ကြံ စည် ထား တာ သူ တို့က တိဘက် တွေ ပဲ ဒါပေမယ့် တရုတ်က နှစ် ပေါင်း
များ စွာ လေ့ ကျင့် ပေးထား တာ ၊ အထူး သဖြင့် အမျိုးသမီး တွေ လို့ ဒလိုင်းလား မား က ပြောပါ
တိဘက် မှာ ဖြစ်ပွား နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င် ဘုန်းတော်ကြီး တွေ မိမိ ကိုယ် ကို မီးရှို့ ဆန္ဒပြ မှု မှာ
ဒလိုင်းလားမား က မြှောက်ထိုးပင့်ကော် လုပ် ပေး တယ် လို့တရုတ် က စွပ် ဆွဲထား ပါတယ်။
တရုတ် အစိုးရ ဟာ ဒလိုင်းလား မား ကို လုပ်ကြံ ဖို့အခွင့် အခါ ကောင်း ကို အမြဲ ချောင်းနေတာ
ကြောင့် ဒလိုင်းလားမား ဟာ တင်း ကျပ် တဲ့ လုံခြုံရေး တွေ နဲ့နေ ထိုင်ရပါတယ်။
ကြွေးဆုံးနိုင်မှာကို စိုးရိမ်ရလို့ Greece ဂရစ် နိုင်ငံရဲ့ နံမယ်ကောင်းအဆင့်ကို ချပစ်ခြင်း
(B – ) အနှုတ်ပြ “ခ” (ခဂွေး) အဆင့် မှ “(ဂဂဂ)” ( “ဂငယ”် ၃ လုံး) ကြွေးဆုံး အဆင့် (ကြွေးဆုံးလုနီးနီး အဆင)့် သို့ချပစ် တာ၊
ကြွေးတွေ ထူထပ်နေတာ၊ စွန့်ပစ်တဲ့ သံတိုသံစ လို ငွေစက်ကူ က တန်ဘိုးမရှိ တဲ့ အခြေ ရောက်တာမျိုး (စက်ကူစုတ်) လို အဆင့်တပ်လိုက်တာ
Greece downgraded on default fears
Fitch ratings agency downgraded debt-crippled Greece deeper into junk territory on Thursday, warning ofa“probable” Greek exit from the euro currency union if new national elections next month produce an anti-bailout government.
“The downgrade of Greece’s sovereign ratings reflects the heightened risk that Greece may not be able to sustain its membership of Economic and Monetary Union,” the agency said inastatement.
Greece ဂရစ် နိုင်ငံ ကိုမသနားဘူး လို့ IMF ကမ်ဘာ့ငွေကြေးအဖွဲ့ အကြီးအကဲ Christine Lagarde ကပြော၊
အာဖရိကတိုက်ကဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ကလေးတွေ အတွက် ပိုဂရုဏာသက် ရတာ
Greece ဂရစ်ပြည်သား တို့က အခွန် ရှောင်တဲ့အကျင့်မကောင်းတာကိုလဲဝေဖန်လိုက်တာ၊
၄င်း တို့က အခွန်ထမ်းကြမယ်ဆိုရင် ပြသနာက ပြေလည်သွားမှာပါ လို့ပြော ၊
The new parties, who mainly campaigned on anti-austerity platforms – have not been able to formagovernment and new elections are scheduled for June 17. One of the most popular parties in Greece, the left-wing Syriza party, wants to abolish Greece’s international bailout agreements, raising fears that Greece will leave the Eurozone and destabilize world markets.